Chinwiwa chinanazi chinoderedza uremu nekukurumidza uye chakavimbiswa! | Kudya kweNutri
Sergio Gallego | | Chipo chekubhadhara
Chinanazi chibereko chine huwandu hwezvivakwa chaizvo inobatsira muviri. Iyo yakanaka sosi ye antioxidants uye inozivikanwa nekuve diuretic huru Inobatsira kubvisa chepfu uye tsvina kubva mumuviri.
Chikafu cheinanazi ndeche yakakwana uye yakanaka kudzikisira muviri uye bvisa zvakawandisa mvura izvo zvinowanzo kukonzera kuwedzera uremu. Zvisinei, kushayikwa kwe zvakakosha zvinovaka muviri zvinokonzera kuti kudya uku kuteverwe kunonyanyisa kwemazuva mana, sezvo neimwe nzira yaigona kuburitsa kukuvadza kwakakomba kuhutano yemunhu anosarudza kuenderera mberi. Ipapo ini ndichataura newe zvakadzama yeichi chikafu chakakurumbira saka unogona kuona zvavari mabhenefiti ayo uye njodzi dzayo dzinogona kuitika.
1 Zvakanakira kudya kweinanazi
2 Chii chinodyiwa nechinanazi chinoratidza
3 Chinodya chinanazi
3.1 Zuva rokutanga
3.2 Zuva repiri
3.3 Zuva rechitatu
4 Cons yezve chinanaini dhayeti
Zvakanakira kudya kweinanazi
La chinanazi chikafu Iyo ine dzakateedzana mabhenefiti izvo zvakakosha kuti iwe uzive uye izvo zvinogona kukubatsira iwe kuonda uye kubvisa iwo mamwe kilos anokunetsa zvakanyanya:
Ndicho nzira yekutsvedza nemhedzisiro, nekuti kudyiwa kwepainapple kunobatsira kuderedza kuzvimba mudumbu ikozvino bvisa mafuta akaunganidzwa mumuviri.
Chinanazi chiri yakanakisa diuretic saka zvakakwana kune Chenesa zvakakwana muviri wese. Kudya kwayo kunobatsira iwe kubvisa uturu hwese nekusachena iri mukati memuviri wako.
Chibereko chine mavitamini akawanda uye kuti inokodzera kuchenesa nhengo senge chiropa kana itsvo.
Chinangwa chinokutendera kuti ujekese dzakasiyana siyana ndiro uye chaizvo zvinonaka pane zvazviri chikafu chinokwezva kwazvo kuonda.
Chii chinodyiwa nechinanazi chinoratidza
Chinodya chinanazi haitauri chero chinhu kunze kwe idya chinanazi panguva dzese dzekudya kwezuva, kuwedzera kunzi kudya ne mamwe marudzi ezvokudya zvakaderera zvekoriori uye nemafuta mashoma kwazvo e kuora muviri nenzira inokurumidza uye inoshanda. Rudzi urwu rwekudya runotendera munhu suka muviri wako wese, kubvisa zvese tsvina uye marara izvo zvinogadzirwa mushure mekudya kwega kwega.
Zvinoenderana nechikafu ichi, chete dzinenge katatu kudya pazuva uye mavari, kuwedzera kune pineapple yepanyama, inogona kuiswa zvakanyanya anenge mazana mana magiramu eakaonda-mhando mhuka mapuroteni sezvazviri nehuku, turkey, hove kana tsuro. Sezvauri kuona, rudzi urwu rwekudya rune kushomeka kwehutano hwakakwana saka zvinongobvumidzwa kutevera kudya uku kwenguva yakareba mazuva mana. Muchiitiko chekuwedzera nzira iyi yekudzikisa huremu kwemazuva mazhinji, munhu ari kutaurwa angatambura zvinetso zvakakomba zvehutano sezvo isingapi muviri wako zvinovaka muviri zvinodiwa kuti ushande zvakanaka.
Ndichakuratidza inotevera muenzaniso menyu yemhando iyi yekudya inosanganisira anenge mazuva matatu kureba.
Panguva yemangwanani unogona kudya zvidimbu zviviri zvepineapple padyo nechigunwe chechingwa chakazara nejamu shoma.
Kwemasikati unogona kudya zvidimbu zviviri zvepineapple zvakasikwa pamwe chete ne nyama yemombe ine broccoli diki yakamisikidzwa nevhiniga nemafuta.
Pakudya kwemanheru unogona kuva zviviri zvakabikwa zvipfuva zvemazamu pamwe nesaladi yeletisi uye zvidimbu zviviri zvepainapple.
Pakudya kwemangwanani unogona kuva makeke maviri ezviyo akazara, yogati yakasvetwa uye zvidimbu zviviri zvepainapple.
Kwemasikati 200 magiramu esalmoni yakakangwa padivi pezvimedu zviviri zvepainapple.
Pakudya kwemanheru unogona kuva saladhi yeletisi uye tuna uye zvidimbu zviviri zvepainapple.
Kwekudya chamangwanani unogona kuva nemakeke maviri ezviyo akazara, kofi uye zvidimbu zviviri zvepineapple.
Zvechikafu 200 gramu ezamu rakakangwa nemiriwo yakabikwa uye zvidimbu zviviri zvepainapple.
Pakudya kwemanheru unogona kugadzira kirimu yemiriwo ine celery, artichoke kana asparagus uye zvidimbu zviviri zvepainapple.
Kana iwe ukatevera chirongwa ichi mukati memazuva matatu, iwe unowana suka muviri wako wese, iwe unodzivirira kuchengetwa kwemvura uye kubudirira bvisa mapaundi ekuwedzera vanokushungurudza zvakadii. Izvo zvakakosha kuti iwe urangarire izvo chikafu chinonatsa uye kuti nekudaro haifanirwe kugara kupfuura mazuva matatu.
Cons yezve chinanaini dhayeti
Izvo zvakakosha kuti urangarire kuti chinanazi chikafu chine kushomeka kwakawanda kwehutano, saka hazvikurudzirwe kuitevera kwemazuva anopfuura mana. Icho chikafu chinobatsira bvisa chepfu muviri uye kurasikirwa nehuremu nenzira yekukurumidza asi izvo haifanire kuwedzerwa nenguva.
Icho chikafu yakadzika kwazvo koriori saka unofanirwa kuchenjerera kana zvasvika pakumutevera sezvo isingape zvakakosha zvinovaka muviri.
Inotaridzirwa sechishamiso chikafu kune icho chainacho chakakosha kudzora mhedzisiro, saka kana ukasachinja maitiro ako zvine chokwadi chekuti kuwedzera uremu uye tora makirogiramu akawanda pane avo vakarasika.
Icho hachisi chikafu chinokurudzirwa uye hachikurudzirwe kune avo vanacho matambudziko etsvo.
Usati wapedza, iwe unofanirwa kuyeuka izvo zve chikafu chinanaini chinoshanda uye iwe unogona kuwana mhedzisiro inotarisirwa, kana yapera akati chirongwa chekureruka, unofanira kutanga mhando ye kudya kune hutano uye kwakaringana inosanganiswa nekurovedza muviri zvishoma zuva nezuva. Nenzira iyi uchadzivisa iyo inotya rebound mhedzisiro uye uchakwanisa kuchengetedza huremu. Vanotsigira chikafu chakadai vanoti chinogona kurasika anenge 2 kilos ehuremu mumazuva matatu chete, ndosaka zvakakosha kuti ubvunze kune nyanzvi yezvokudya kana nyanzvi usati watanga chikafu ichi uye nekudzivirira zvinetso zvakakomba zvehutano. Nyanzvi ichaita chidzidzo ndokuudza kana zvichikuvadza kana kwete kutanga iyi mhando ye nzira yekutsvedza.
Ndobva ndakusiya vhidhiyo kuti ikubatsire kuziva zvakawanda nezve kudya kwakakurumbira kwepainapple uye ndeapi mabhenefiti ayo nezvose zvinopesana nazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kudya kweNutri » Chipo chekubhadhara » Chinwiwa chinanazi
Sei zvichikosha kuti vakweguru vaende kuna chiremba wemazino?